PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू | मोबाइल फोरम
PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू
डेनियल टेरासा | 18/11/2021 19:00 | इन्टरनेट
को सफल अवतरण पछि सोनी भर्चुअल रियलिटी गेमहरूको संसारमा, मैले PS3 VR मा 4D चलचित्रहरू हेर्न सक्षम हुनका लागि ती समान स्रोतहरूको शोषण गर्नु अघि यो समयको कुरा थियो। अनुभव बिल्कुल अविश्वसनीय छ। यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई यसको आनन्द लिनको लागि जान्न आवश्यक सबै कुरा व्याख्या गर्न जाँदैछौं। हेडफोनहरू कसरी कन्फिगर गर्ने देखि रोचक चालहरूको श्रृंखलामा।
हामीले पहिले नै थाहा पाएका यसका सबै गेमिङ प्रकार्यहरूका अतिरिक्त, PlayStation VR ले चलचित्रहरू हेर्नको लागि एक विशेष प्रकार्य पनि प्रदान गर्दछ। उही हो र किनेमेटिक मोड, एक समाधान यति बहुमुखी छ कि यो भर्चुअल वास्तविकता बाहेक PS4 खेलहरूमा प्रयोग गर्न र 2D मा इन्टरनेट ब्राउज गर्नका लागि दुवै उपयोगी छ। र, सबै भन्दा माथि, 3D मा भर्चुअल वास्तविकता भिडियोहरू हेर्न।
अन्य चीजहरू मध्ये, यो मोडले हामीलाई एक दिन्छ सुधारिएको स्क्रिन आकार, कुनै पनि मानक टेलिभिजन भन्दा धेरै ठूलो। अतिशयोक्तिको डर बिना, हामी भन्न सक्छौं कि यो एक IMAX सिनेमा जस्तै हो, तर आदर्श स्क्रिन आकार र पूर्ण अलगाव संग। विचार यो हो कि हामी महसुस गर्छौं कि हामी फिल्म थिएटर भित्र र भित्र छौं। उदाहरण को लागी के प्रस्ताव को लागी केहि समान नेटफ्लिक्स VR.
तर यो अद्भुत 3D अनुभवको मजा लिन र उत्कृष्ट दृश्य मोड प्राप्त गर्न सुरु गर्नु अघि, केहि समायोजनहरू गर्न आवश्यक छ:
1 प्लेस्टेशन VR मा सिनेमेटिक मोड कसरी सेट अप गर्ने
2 PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू
2.3 रिंगको प्रभु
2.4 बदला लिनेहरू
प्लेस्टेशन VR मा सिनेमेटिक मोड कसरी सेट अप गर्ने
PlayStation4 को सिनेमेटिक मोड सेटअप गर्न धेरै सजिलो छ। हामीले गर्नुपर्ने भनेको कन्सोल खोल्नु र हेडफोनहरू प्लग इन गर्नु हो। यति मात्र गर्दै PS4 मेनु VR दर्शक मार्फत देखा पर्नेछ। त्यहाँ हामीले हाम्रा मनपर्ने चलचित्रहरू हेर्दा इच्छित गुणस्तर समायोजन गर्न विकल्पहरू फेला पार्नेछौं
जान्नको लागि पहिलो कुरा यो हो कि यो मोडले हामीलाई भर्चुअल वास्तविकता चलचित्रहरू हेर्न अनुमति दिन्छ तीन स्क्रिन आकार बिभिन्न:
सानो (117 इन्च)।
मध्यम (१६३ इन्च)।
ठूलो (२२६ इन्च)।
यी स्क्रिन साइजहरू समायोजन गर्न, दर्शक मेनुमा हामीले पहिले सेटिङहरूमा जानुपर्छ, त्यसपछि उपकरणहरू प्रविष्ट गर्नुपर्छ, प्लेस्टेशन VR छान्नुपर्छ र अन्तमा सिनेमेटिक मोड चयन गर्नुपर्छ।
एउटा सानो टिप: यद्यपि 226-इन्च फिगर धेरै लोभलाग्दो छ (सोनीका अनुसार, चलचित्र थिएटरको अगाडिको पङ्क्तिमा बसेको जस्तै), यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ। सधैं "ठूलो" को अर्थ "राम्रो" होइन। सहसम्बन्ध ठीक उल्टो छ: स्क्रिनको आकार जति ठूलो हुन्छ, छवि गुणस्तर खराब हुन्छ। यस आकारमा Blu-Ray गुणस्तरको स्तरको आशा नगर्नुहोस्। त्यस कारणको लागि हामी 163 इन्चको लागि छनौट गर्न सिफारिस गर्छौं।
PS3 VR मा 4D चलचित्रहरू कसरी हेर्ने
सोनीले यसको सुरुवात पछि कन्सोलको मिडिया प्लेयर अनुप्रयोगमा धेरै अपडेटहरू जारी गरेको छ। त्यसका लागि धन्यवाद, तपाईंले हाल PSVR मार्फत विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरूको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यसरी, हामी भर्चुअल वास्तविकता चलचित्रहरू हेर्न सक्छौं ढाँचाहरू जस्तै MKV, AVI, MP4, MPEG2 PS, MPEG2 TS, AVCHD, JPEG वा BMP।
अडियो गुणस्तरको सन्दर्भमा, सोनीले एक उल्लेखनीय प्रारम्भिक कमीलाई सच्यायो, जसमा हेडफोनहरूले सकेनन् 3D Blu-Rays खेल्नुहोस्। यो सबै प्लेस्टेशन 4.50 प्याचसँग फिक्स गरिएको थियो, जसले सिनेमेटिक मोडमा अपडेट सहित केही महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू प्रस्तुत गर्‍यो। एक 120Hz रिफ्रेस दर पनि साना र मध्यम स्क्रिन आकारहरूको लागि समावेश गरिएको थियो। यो कुनै सानो परिवर्तन होइन, किनकि यसले प्रयोगकर्तालाई टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने र अन्य असुविधा महसुस नगरी लामो समयसम्म प्लेस्टेशन VR 3D भिडियोहरू (लगभग 300 युरोमा बिक्रीमा) हेर्न अनुमति दिन्छ।
निस्सन्देह, यो सामग्रीको आनन्द लिनको लागि USB मेमोरी प्रयोग गर्न वा स्थानीय मिडिया सर्भरमा अद्यावधिक भण्डारण गर्न आवश्यक छ, किनकि यसलाई सीधा PS4 मा भण्डारण गर्न सकिँदैन। कम्तिमा अहिलेको लागि।
हामीले यो सबैमा थप्नु पर्छ कि प्लेस्टेशन VR मार्फत हामीले 360 डिग्रीमा रेकर्ड गरिएका भिडियोहरूको मजा लिन सक्छौं। र एक सर्वदिशात्मक क्यामेरा संग खिचिएको फोटोहरु को। हामी संलग्न उपकरणबाट कुनै पनि प्रकारको उपयुक्त सामग्री प्ले गर्न सक्षम हुनेछौं।
तर पोष्टको विषयलाई नबिर्सौं: 3D सिनेमा र भर्चुअल वास्तविकता। त्यो भिडियो गेमको संसारभन्दा बाहिरको PS4 VR को ठूलो सम्पत्ति हो, सम्भावनाहरूको सम्पूर्ण क्षेत्र जुन हामीले भर्खरै पत्ता लगाउन थालेका छौं।
Blu-Ray मा उपलब्ध कुनै पनि 4D चलचित्र PS3 VR मा हेर्न सकिन्छ, स्पष्ट रूपमा सूची अनन्त छ। यद्यपि, त्यहाँ केही शीर्षकहरू छन् विशेष गरी यो अनुभवको लागि उपयुक्त। हामीले ए बनाएका छौं चलचित्र चयन जुन यस प्लेटफर्मको लागि उद्देश्यमा फिलिम गरिएको देखिन्छ। त्यहाँ केहि छन् जुन केहि वर्ष पुराना छन्, तर तिनीहरूका विशेषताहरूले तिनीहरूलाई यो सिनेमाई मोडको लागि आदर्श बनाउँछ। तपाईंले तिनीहरूलाई चलचित्र वा टिभीमा देख्नुभएको भए तापनि, हामी तपाईंलाई तिनीहरूलाई फेरि हेर्न र फरक पत्ता लगाउन प्रोत्साहन गर्छौं:
अवतार: PS3 VR मा हेर्नको लागि उत्कृष्ट 4D चलचित्रहरू मध्ये एक
PS3 VR मा 4D चलचित्रहरू हेर्ने आश्चर्यको परीक्षण गर्न म यो भन्दा राम्रो प्रस्तावको बारेमा सोच्न सक्दिन। फुटेज सम्पादन गर्दा अवतार धेरै नवीन, पहिले कहिल्यै नदेखेको दृश्य प्रभाव प्रविधिहरू प्रयोग गरियो। जेम्स क्यामरून, निर्देशक, नयाँ गति क्याप्चर एनिमेसन टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गरेर सिर्जना गरिएको कम्प्युटर-उत्पन्न फोटोरियलिस्टिक क्यारेक्टरहरूको लागि रोजे।
आविष्कारहरूले पान्डोरा जङ्गल जस्ता ठूला क्षेत्रहरूमा प्रकाश पार्ने नयाँ प्रणाली र अनुहारको भावहरू खिच्नको लागि सुधारिएको विधि समावेश गर्यो।
अवतारका निर्माताहरूले फिल्ममा 237 मिलियन डलर खन्याए, यद्यपि यसले बक्स अफिसमा दस गुणा बढी कमायो। निस्सन्देह एक शानदार सफलता। पुरानो हुन नसकेको चलचित्र आज पनि बारम्बार रमाइलो गर्न लायकको गहना बनेको छ। विशेष गरी 3D मा।
PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू: गुरुत्वाकर्षण
PS3 VR मा 4D संवेदी विसर्जनको चक्कर महसुस गर्न अर्को उत्तम चलचित्र हो गुरुत्वाकर्षण (२०१३)। यो प्रारम्भिक रूपमा डिजिटल ढाँचामा फिलिम गरिएको थियो, पोस्ट-उत्पादन प्रक्रियामा 2013D ढाँचामा स्थानान्तरण गरिएको थियो।
नदेखेकाहरूका लागि, यो पृथ्वीको परिक्रमामा रहेको अन्तरिक्ष यान एक्सप्लोररमा भएको दुर्घटनाको बारेमा अद्भुत थ्रिलर हो। नायकहरू हुन् जर्ज क्लुनी र सान्ड्रा बुलक, उनीहरूले आफ्नो प्रदर्शनका लागि अनगिन्ती प्रशंसा पाए। यसको विशेष प्रभाव र यसको उत्पादनमा प्रयोग हुने प्रविधिको लागि पनि यही भन्न सकिन्छ।
जेम्स क्यामरुन आफैंले निर्देशकलाई सल्लाह दिए अल्फोनसो क्युरोन चलचित्र निर्माणको लागि नयाँ डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमा। प्रिमियर पछि, अवतारका निर्देशकले यो नै सबैभन्दा राम्रो अन्तरिक्ष चलचित्र भएको घोषणा गरे। भर्चुअल वास्तविकतामा हेर्दा यसको अद्भुत दृश्य शक्ति गुणा हुन्छ।
कुल इमर्सिभ थ्रीडी अनुभव: द लॉर्ड अफ द रिङ्स
भर्चुअल रियालिटी टेक्नोलोजीको साथ मात्र हामी मध्य पृथ्वी, मोर्डोरको अँध्यारो पहाड वा ला कोमार्काको हरियो पहाडहरूमा यात्रा गर्न सक्छौं। वास्तवमा, द लॉर्ड अफ द रिङ्स सागा PS4 VR मार्फत सबै तीव्रताका साथ स्वाद लिनको लागि अर्को आदर्श प्रस्ताव हो।
को महान काम को बारे मा थप गर्न को लागी केहि नयाँ छैन JRR Tolkien र को हातले सिनेमामा यसको अनुकूलन पीटर जैक्सन। हो, हामी यी चलचित्रहरूको उत्पादनमा प्रयोग गरिएका नवीन प्रविधिहरू र डिजिटल भिजुअल इफेक्टहरूको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं, जुन हामीले PS4 VR मा देख्दा अझ बढी चम्किन्छ।
ध्वनि प्रभावहरूको लागि विशेष उल्लेख। orcs को गर्जना देखि Gollum को कानाफूसी सम्म, हाम्रो कानले हामीलाई ती सबै उत्कृष्ट सेटिङहरूमा ढुवानी गर्नेछ, हामीलाई एक अनुपम अनुभव प्रदान गर्दछ।
PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू: The Avengers
मा फर्केर डुब्न कस्तो राम्रो विचार भर्चुअल रियालिटीमा भेनागडोर गाथा! शृङ्खलाका चार शीर्षकहरू (द एभेन्जर्स, द एज अफ अल्ट्रोन, इन्फिनिटी वार र एन्डगेम) मार्वलका फ्यानहरू र एक्शन र काल्पनिक चलचित्रहरूका प्रशंसकहरूलाई हर्षित पार्ने गरी थ्रीडीमा उत्पादन गरिएका थिए।
ठ्याक्कै यही कारणले गर्दा PS4 VR ठूलो पर्दामा हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सागाहरू मध्ये एकको उत्कृष्ट क्षणहरूको आनन्द लिने उत्कृष्ट अवसर हो। सुधारिएको अनुभव।
जुरासिक पार्क, शैलीबाट बाहिर नजाने भारी फिल्म
अन्तमा, क्यापिटल अक्षरहरू भएको क्लासिक, PS3 VR मार्फत 4D मा अनुभव गर्नको लागि उत्तम। जुरासिक पार्क यो लगभग तीन दशक पहिले 1993 मा रिलीज भएको थियो। जे होस्, यो ती राउन्ड चलचित्रहरू मध्ये एक हो (सिक्वेलहरू अर्को विषय हो) जुन हेर्दा थाक्दैन। साहसिक, विज्ञान कथा र डरावनी फिल्मको मिश्रण जसले समय बित्दा पनि आफ्नो मौलिक आकर्षणको औंस गुमाएको छैन।
भर्चुअल वास्तविकताले हामी डायनासोरहरूका बीचमा हिंड्ने विचित्रता ल्याउनेछ। हामीले उहाँको उपस्थिति, मनमोहक र डरलाग्दो, हाम्रो वरिपरि, यसरी बाँचिरहेको महसुस गर्नेछौं स्टीवन स्पिलबर्ग को महान रचनाहरु मध्ये एक पहिलो व्यक्ति मा। एउटा गहना जुन राम्रो चलचित्र प्रशंसकहरूले फरक तरिकाले आनन्द लिन सक्नेछन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » PS3 VR मा हेर्नको लागि 4D चलचित्रहरू
BIOS के हो र यो तपाईको पीसीमा के हो